Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta la kulmay Golaha wasiirada XF ah – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta la kulmay Golaha wasiirada XF ah
Luulyo 19, 2015 9:50 b 0
Axad, Luuliyo 19, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta shir guddoomiyay kulan ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirrada.
Kulanka ayaa waxaa looga doodayey qorshaha dowladda ee dib u eegista miisaaniyadda 2015 iyo shirka lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho dabayaaqadda bishan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo beesha caalamka (High Level Partnership Forum HPLF).
Madaxweynaha oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in loo baahan yahay in Golaha Wasiirrada ay la yimaadaan siyaasad horey loogu sii dhaqaajinayo barnaamijyada horumarinta ee dowladda, isla markaana ay muujiyaan mas’uuliyad wadareed la xiriira hawlaha qaranka.
“Si loo xoojiyo daah-furnaanta waxaa inaga go’an inuu jiro isla xisaabtan, mas’uul kastana lagu qiimeeyo waxqabadkiisa iyo daacadnimada uu qaranka ugu adeegayo. Waa in wasaaradaha ay xogta isla wadaagaan, isla markaana wadatashiga la xoojiya’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kula dardaarmey Golaha Wasiirrada inay ka shaqeeyaan dhameystirka qaab dhismeedka wasaaradaha, tallaabadaas oo uu sheegay inay wax ka tareyso in bulshada loo fidiyo adeegyadii ay u baahnaayeen.
Shirkaasi ayaa Golaha Wasiirrada waxaa uu ku ansixiyey talo soo jeedinta barnaamijka dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2015.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Geeddi